China CY-6 (Aluminium hanger) vagadziri uye vanotengesa | Jialong
Zvatinoteedzera hazvisi chete hanger, isu tiri kutsvaga mhando yehupenyu mafungire, akasununguka uye akapusa.
ruvara Ruva goridhe, dota resimbi, sirivheri yegirazi
unaku hwezvinhu aruminiyamu chiwanikwa
chinangwa Wadhi yekuchengetera, kuomeswa kweberere
basa Anti skid, hapana zvisaririra, hapana kupera, anti ngura
1, Aluminium alloy zvinhu zvine huremu hwakareruka uye yakasimba simba zvinonyanya kushandiswa kugadzira mhango yakatetepa-madziro inoumbwa muchinjikwa-chikamu, chiri nyore kushandisa uye kudzikisa huremu. Chikamu chemuchinjikwa chine simba rakakombama rekukotama, saka hanger yakagadzirwa neiyi inogara yakasimba uye ine deformation diki.
2). Yakareruka dhizaini, inoyevedza kutaridzika, yakatsetseka mhepo, imwechete-chidimbu kuumbwa, ergonomic dhizaini, inokodzera zvakanyanya radian yehembe, hapana maratidziro epfudzi kuomesa, ichiita mbatya dzive noutano.
3) Triangle michina dhizaini, yakasimba kutakura-kutakura, yakawedzera uye yakasindikana fudzi, inotakura zvakanakisa, ine moyo wakasimba, mitoro yakawanda inogona kutakura.
4) Solid willow mbambo yekusimbisa, ruoko kuroverera, yakasimba uye yakasimba, inogona kushandiswa kwehupenyu hwese.
Yakasanganiswa neChina neWestern aesthetic tekinoroji, tarisa kuhupenyu hwazvino hwekuomesa dhizaini, mwenje wehuremu pasina yepamusoro-chimiro dhizaini dhizaini
Chinangwa chepakutanga che H-mhando mbatya dhizaini ndeye iyo yakazara mhuri nzvimbo yekugara. Inofananidzwa nemamwe maraki ehembe, ine yakawanda nzvimbo yekuomesa, kugadzikana kwakasimba, uye hazvisi nyore kupeperetswa nemhepo.
Aviation giredhi aruminiyamu chiwanikwa zvinhu, zvemazuva ano maitiro ekucheka, kutaridzika kwemafashoni, pamba zvakare inzvimbo yakanaka.
Tine zvidimbu mazana mana nemakumi mashanu. Iko kushoma kurongeka imwe kesi.
Yedu aruminiyamu mbatya rack rack yekugadzira tambo yekugadzira, kuti ive nechokwadi chehunhu, isu tine munhu akakosha wekutonga ese nhanho. Muchina wega wega unotariswa kuona mhando yezvose zvigadzirwa.
Pashure: CY-7 (Aluminium hanger)
Zvadaro: CY-5 (Akangwara emagetsi mbatya rack)
Aluminium Alloy Kuomesa Rack
Aluminium Hembe Kuomesa Rack
Aluminium Dish Kuomesa Rack
Aluminium Kuomesa Rack
Kunze Aluminium Kuomesa Rack
Space Aluminium Kumba Kuomesa Rack